သစ်တစ်ခုအသုတ်အသစ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား အပေါ်ပေါ်ထွန်းခဲ့သည် Lego Group မှ အဆောက်အ ဦး ညွှန်ကြားချက် အပြည့်အဝကောလာဟလထုတ်ဖေါ်အကြံပြု, ပေါ်တယ် Marvel စီးရီးအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေနံပါတ် 71031 အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ် Marvel-themed collection - ပထမ ၄ ခုကိုအခြေခံပြီးကောကောလာဟလထွက်ပေါ်နေတာ Disney+ Marvel WandaVision၊ Falcon နှင့် Winter Soldier၊ Loki နှင့် What If …? ပွဲများ၊ ဒါကရှင်းပါတယ် စုဆောင်းထားသောအသေးစား ၏ထုတ်ကုန်အရေအတွက်ကအစီအစဉ်အောက်ပါစီးရီး အသက် 71029 စီးရီး 21 နှင့် 71030 Looney တီးလုံး.
71031 အတွက်အမှန်တကယ်ညွှန်ကြားချက်များမရှိသေးပါ၊ တိုးချဲ့ခြင်းအားဖြင့်ပုံရိပ်များမရှိသေးပါ။ သို့သော်စာရင်း၏တည်ရှိမှုက၎င်းကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်မြင်ရန်ရှည်လျားလွန်းမည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ အပါအ ၀ င်ဆောက်လုပ်ရေးညွှန်ကြားချက် ၀ န်ဆောင်မှုသို့အခြားတင်ထားသောအရာများ 40497 ဟယ်လိုဝှေး နှင့် 30392 Hermione ရဲ့စားပွဲခုံ, ရက်ပေါင်း (သို့မဟုတ်ပင်နာရီ) တစ် ဦး အမှု၌ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကောလဟာလများအနေဖြင့်မျှော်လင့်ရန်အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး သတိပေးချက်သည် Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။ White Vision, Zombie Captain America, Spider Supreme နှင့် Bucky Barnes အပါအ ၀ င်အခြား 2021 လွှတ်တင်မှုကိုလိုက်နာရန်ပြောထားသည်။
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: ပျော်ရွှင်မှုကိုတွေ့နိုင်သည်…
LEGO သည်ယခု VIDIYO အစုံများကိုထုတ်ပေးနေသည် →